Herisetra mifangaro hadrohadro sy hevidraikitra ary lainga – Tsy nampoizintsika Io · Global Voices teny Malagasy
Tezitra noho ny fanavakavahana aho
Voadika ny 21 Avrily 2019 12:31 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Nederlands, Español, Italiano, English
(Nandika avy amin'ny teny Anglisy ho amin'ny teny Malagasy, )
Niotrika ho toy ny tetikasan-dahatsoratra izy ity nandritra ny volana maromaro. Sahala amin'ny hoe andro idealy hamoahana azy ny 19 martsa 2019. Saingy henoiko ireo lahateny mpanavakavaka, tsy tia vahiny ary mpankahala silamo ataon'ireo mpanao politika Nerlandezy tohin'ireo hetsika vao haingana. Tsy voatery ho ampiharina anaty hetraketraka ny fahefana. Nefa matahotra aho fa ho eto, Pays-Bas “mpandefitra”, izany.
“Raha te-hahalala ny Pays-Bas ianao, jereo iza no manan-jo hanao fihetsiketsehana. Nazis, Pegida [vondrona politika elatra havanana avy any Alemaina]… Raha tokony hisakana ireo Nazis, ireo olona miady ho amin'ny fiarahamonina mangarahara no sakanareo. Mahazo fandrahonana herisetra avy amin'ny elatra havanana izahay ary sakanan'ny mpitandro filaminana ny diabenay dia avelany hanao diabe ireo Nazis. Omen-dry zareo azy ireo avokoa ny sehatra rehetra.” Naomi Pieter.
Ry Nederlanders malala,
Zato taona mahery izao, nisy zavatra nandrehitra afo tao ambany faladihan'ireo ray aman-drenibeko talohabe tany ka nandositra an'i Eoropa Atsinanana izy ireo mba ho any Etazonia niaraka tamin'ireo zanany. Ampolotaona vitsy taty aoriana, tsy misy tavela momba an'ireo vondrom-piarahamonina jiosy nandosiran'izy ireo, afa-tsy fahatsiarovana sisa. Rava tanteraka ny ankamaroany. Kila sy may. Voafafa tao anatin'ireo sarintany. Fantatrao ny tantara. Nijaly ihany koa i Pays-Bas. Nalaina an-kery ireo Jiosy holandey, nampijaliana sy novonoina. Novonoina ireo olona teto, matin'ny hanohanana sy nampijaliana.
Matetika aho no manontany tena ny amin'izay mety hiova raha noeritreretin'i Eoropa ny fampitandremana mombav ny handosiran'ireo Jiosy hankany amin'ireo tany hafa. Ho tahaka ny inona izao tontolo izao? Hihatra amin'ireo sisa tavela amintsika ihany koa ny herisetra iaretan'ireo marefo vitsy an'isa: ireo olona manam-pikasana tsara, ireo olona mangina sy miaina tsara.
Herisetra mifangaro hadrohadro sy hevidraikitra ary lainga – Tsy nampoizintsika io. Tsy tongatonga ho azy akory ny herisetra natao an'ireo Jiosy tao Eoropa. Nanomboka tamin'ireo fiampangana diso io, ireo fanaovana tsindrio fa lavo ary ireo trangana herisetra ataon'olon-tsotra. Naharitra ampolo taona ny herisetra faobe.
Ary ankehitriny aho miaina eto Eoropa, ao amin'ny firenena izay tiako, anivon'ireo olona izay ankafiziko. Mino aho fa mikofoka ao am-pasana ireo ray amandrenibeko. Reko fotsiny izy ireo manontany ahy ny antony tsy iverenako intsony any amin'ny tany iray izay nampifandraisin'izy ireo tamina herisetra. Tsapako mamelona ahy koa ny tebiteby sy ny tahotr'izy. Indraindray, atahorako ny mitondra ny kintan'i Davida, saingy ataoko ihany izany. Tsy tiako ny tsy ho hita. Ampanetrena tena, atahorako kokoa ny mitafy amboninankanjo iray misy soratra eo amboniny hoe #BlackLivesMatter na Fanavakavahana ny Zwarte Piet. Marina io na dia ekeko aza ireo fihetsehampo roa ireo.
Kanefa, isanandro, mivoaka miaraka amin'ny hodiny ireo olona mainty sy mavo. Tsy amin'ny fisintonana fotsiny ny sweat-shirt na amin'ny fametrahana ny maha-izy azy eo ambanin'ny tendan'ankanjo ho hahafahan-dry zareo miala amin'ny herisetra vokatry ny fanavakavahana..
Ary atrehan-dry zareo ny herisetra. Avy amin'ireo olona tsirairay io sy ireo amanampahefana izany. Hitako izany. Nahita izany ianareo. Vao haingana, nanatrika hetsika iray fanoherana ny blackface aho. Niakatra fiara fitaterana aho niaraka tamina olona 15 teo ho eo. Ho any Den Helder izahay. Notetezin'i Mitchell Esajas avy amin'ny Black Archives nojerena ireo taridàlana ho an'ny hetsika niarahana taminay. Notoroana hevitra izahay ny mba hilamina sy ho tony. Tsy ela, nosamborin'ny mpitandro filaminana izahay. Tena nahakivy, saingy tsy nahatezitra. Nolavina ny zonay hivory ampilaminana.
Raha tokony hanohy ho any Den Helder, nivily nankany Amstelveen izahay ary nandray anjara tamina hetsika efa nitranga tao. Nisy tezitra taminay, saingy tsy nisy zava-tsy nampoizina na nihoa-pefy. Tsy izay no zava-misy tany an-kafa tany, izay nanafihana an'ireo mpanao fihetsiketsehana niaraka tamin'ireo fiarahabana vaovaon'ny Nazi, toraka, ompan'ny mpanavakavaka sy ny herisetra ara-batana.
Mitchel Esajas avy ao amin'ny Black Archives miresaka amin'ny mpitandro filaminana
Rehefa nandre ny Praiminisitra Rutte aho milaza an'ireo mpikatroka mpanohitra ny fanavakavahana ho “mahery fihetsika”, tsapako ho mitombo ilay tahotra fahiny. Ahoana no hieritreretana ny fitolomana hisian'ny fiarahamonina mampiaty kokoa ho toy ny fanaovana an-tendrony? Fantatry ny Praiminisitra ve hoe firy ny isan'ireo fandrahonana ho faty voarain'ireo mpikatroka manohitra ny fanavakavahana? Toy inona ny fandrahonana ny fiarovana / fitoniana ara-batan'izy ireny? Toy inona ny famotehana ireo zo sy fahafahan-dry zareo ao anaty fiarahamonina? Raha toa ireo olana nateraky ny fanavakavahana ka azo novahana fotsiny nandritra ireo fandaharana adihevitra, tsy ho nisy mihitsy ny fihetsiketsehana.
Manontany tena aho hoe aiza ny hafanampo ankehitriny? Aiza ny fahaizana mitarika? Any amin'ny ankolafin'ireo mpikatroka KOZP no ahitako azy. Na izany aza, raha toa ireo manampahefana voafidy tsy te-hiaro ny zon'ireo marefo vitsy anisa, inona no hiafaran'ny sisa ambiny amintsika?
Manontany an'io aho amin'ny maha olompirenena ahy sy amin'ny maha zanaka vavin'ireo mpialokaloka ahy. Efa nahazoazo taona aho satria nitombo tanaty vondrom-piarahamonintsy hiresaka an'izay niainany, na dia misy ankizy kely aza manodidina eo. Nisy ireo hafa izay nitahiry anaty ny feriny ary tsy afa-niala velively tamin'ny fangirifiriana ara-tsaina. Nanjary sambatra sy mahavokatra aza ireo sasantsasany. Noho ny fisarihana ananan'izy ireo, nivoady tamin'ny tenako aho ny ho lasa olon-dehibe mahery fo, marina ary tsy miangatra. Tsy voady voatazoko hatrany hatrany akory io. Isanandro anefa, manjary misisika foana izay voadin'ny fahazazana izay.
Azoko antoka fa maro aminareo, anisan'izany ny Praiminisisitra Rutte, no nanao fampanantenana mitovy tamin'io fony mbola ankizy. Nilaza tamin'ny tenanareo fa handray anjara amin'ny fanoherana, izay hiarovanareo ny zon'ny hafa, izay hanaovanareo izay azonareo atao, na dia hetsika kely monja aza izany.
Tsy misy fotoana toy ny anio mba hanatanterahana ny fanomezantoky. Mety hisaina ianareo hoe tsy misy dikany ny fandraisana andraikitra hisian'ny fomba mampiaty rehefa fetin'ny Saint-Nicolas noho ny tontolo anaty ady sy krizy samihafa. Kanefa, raha avelantsika ireo marefo kokoa amintsika hivelatra any anaty fiarahamonina misy antsika sy mahay mandray azy, ho mora tontosaina kokoa ireo vahaolana ho an'ireo olantsika.